မေမေတစ်ယောက် ဖြစ်ရတာ အခက်အခဲ များစွာနဲ့ပါ .. ဒါပေမဲ့ သင်ကျော်လွှားနိုင်တာ ယုံကြည်ပါ - Hello Sayarwon
မေမေ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေး နှစ်လုံးက တော်တော်လေး အဓိပ္ပာယ် လေးနက်ပါတယ်။ မေမေဆိုတဲ့ တာဝန်က ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ အလုပ်တွေထဲမှာ အခက်ခဲဆုံးပါ။ မေမေ ဆိုတဲ့ အလုပ်က လစာ ဝင်ငွေ မရသလို သင်ယူလေ့လာစရာ သင်တန်း မရှိဘဲ ကိုယ်တိုင် ရုန်းကန်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ရပ်ပါ။
ကလေးကို မွေးဖွားပြီးချိန်ကစလို့ ကြီးပြင်း အရွယ်ရောက်သည်အထိ စက္ကန့် မလပ်တစ်ချိန်လုံး အပတ်တကုပ် ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရတဲ့ အလုပ်အကိုင် တစ်ခုပေါ့။
သေးခံ လဲတာကစလို့ ကလေးကို ချော့တာ၊ နို့ချို တိုက်ကျွေးတာနဲ့ အာဟာရ စီစဉ်ပြင်ဆင်တာအထိ မကုန်နိုင်သော အလုပ်တွေကို လုပ်ရတာပါ။ အဖိုးအခဆိုတာ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မရဘဲ ပျော်ရွှင်မှုကိုပဲ ပီတိဖြစ်ရင်း အကောင်းဆုံး ကြီးပြင်းလာအောင် ပျိုးထောင်ရတာပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုလည်း အခြားအလုပ်တွေထက် ပိုပြီး ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဝန်တာတွေ များပြားလှတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာ တစ်ရပ်ကို မေမေ လို့ ခေါ်တာပါ။ ဒါ​ကြောင့်လည်း မေမေဖြစ်ရတာ ခက်ခဲပင်ပန်းတယ်လို့ ဆိုကြတာပေါ့။
မေမေ တစ်ယောက် ဖြစ်ရတာ လွယ်ကူရဲ့လား ?
မေမေ တစ်ယောက်ဖြစ်လာရင် တစ်ဘဝတာမှာ ကြုံခဲ့သမျှ အရာတွေထက် ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ အရာတွေကို ကြုံရနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးပျက်တာကစလို့ ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွားထားတဲ့ ကလေးကို အကောင်းဆုံး ကြီးပြင်းလာစေဖို့ပေါ့။
ကိုယ်၊နှုတ်အမူအရာယဉ်ကျေးစေဖို့၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ပြီး ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်စေဖို့၊ ပုံမှန်ကြီးထွား ဖွံ့​ဖြိုးစေဖို့ စတဲ့ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာတွေကို အသေးစိတ် ဂရုစိုက်မှုကို အချိန်မလပ် လုပ်ဆောင်ကြရမှာပါ။
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေများ မှားယွင်းသွားမလား ?
မေမေတစ်ယောက် ဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင် အတွက်ရော ကလေးအတွက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက် များစွာ ချမှတ်ရပါတယ်။ ဒီလို ချမှတ်တိုင်းမှာ ငါ ဆုံးဖြတ်တာ မှန်ပါ့မလား။ အဆင်ပြေပါ့မလား။ ကလေးကိုများ ထိခိုက်စေမလားလို့ အကြိမ်များစွာ တွေးပူနိုင်ပါတယ်။ ကလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာက မေမေတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ အခက်အခဲဆုံးတွေထဲက တစ်ခုပါ။
ဒီတော့ သတိပေးချင်တာက ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တဲ့အရာကို ဆုံးဖြတ်မှုတိုင်းဟာ မှားတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အစောပိုင်းမှာ ပြည့်စုံမှု အားနည်းနိုင်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး တွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ အတွေ့အကြုံက ပြည့်ဝအောင် သင်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ မေမေတို့ရေ။
ကလေး ကျန်းမာရဲ့လား ?
ဒါကလည်း မေမေတိုင်း စိုးရိမ်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ကလေးက ခံစားနေရတာကို သေသေချာချာ မဖော်ပြတတ်၊ မပြောပြတတ်သေးတဲ့ အရွယ်မှာ တစ်ခုခုဆို ကလေးနေကောင်းရဲ့လား။ တစ်နေရာရာကများ နာနေလား၊ ဗိုက်ထဲကများ အောင့်နေမလား ဆိုပြီး စိုးရိမ်မိတာ တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်ထက် မနည်းဖြစ်နေမယ် ထင်ပါတယ်။ ကလေးက အိပ်လွန်းနေရင်လည်း နေမကောင်းလို့လား ဆိုပြီး စိုးရိမ်မိသေးတယ်ဟုတ်။ နဖူးလေးကို ပါးလေးကပ်ရင်း ကိုယ်များနွေးနေလားဆိုပြီး စမ်းရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပဲနော်။
အာဟာရ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ပြည့်စုံရဲ့လား ?
ကလေးတစ်ယောက် အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့က မွေးစကနေ ၅ နှစ်တာအတွင်းမှာ အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် ကျွေးမွေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီတော့ အာဟာရလည်း ပြည့်ချင်တယ် ဘာကျွေးရမလဲ မသိ။ တစ်ခုခုကျွေးမယ် စိတ်ကူးတိုင်း အာဟာရ ပြည့်စေပါ့မလားလို့ စိတ်ပူနေမိတယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးကို နေ့စဉ်
ပရိုတင်း ​ကြွယ်ဝတဲ့ အဆီမပါတဲ့ အနီရောင် အသား၊ အရေခွံမပါတဲ့ ကြက်သား၊ ငါး၊ ကြက်ဥ၊ ပဲနီလေး စတာတွေ ကျွေးပေးပါ။
ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝတဲ့ လိမ္မော်သီး၊ ပန်းသီးစိမ်း၊ မာလကာသီး (အစေ့ဖယ်ပေးပါ)၊ ဂရိတ်ဖရုစ် စတာတွေ ပြင်ဆင်ပေးပါ။
ကယ်လ်ဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့ နို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ချိစ်၊ အာဟာရဖြည့်နို့ စတာတွေ တိုက်ပေးပါ။
အမျှင်ဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ သင်္ဘောသီး၊ ကိုက်လန်၊ ရွှေဖရုံသီး၊ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးပါ။
သံဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အနီရောင် အသား၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ပင်လယ်စာ၊ ဟင်းနုနွယ် စတာတွေ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပေးပါ။
ကလေးကို နေ့စဉ် အာဟာရတွေမှာ ဒါတွေ ပါအောင် ပြင်ဆင်ပေးတာက ကလေးကို လိုအပ်တဲ့ အာဟာရတွေ ပြည့်ဝစေပြီး ကျန်းမာစေမှာပါ။
ဉာဏ်ရည် ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးမိရဲ့လား ?
ကိုယ့်ရဲ့ ကလေးကို ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကြီးပြင်းလာစေချင်တာက မေမေတိုင်းရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ပါ။ ဒီစိတ်ကူးကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ဆိုရင် ကလေးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ဦးနှောက်နဲ့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်ဖြစ်တဲ့ DHA ကြွယ်ဝတဲ့ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ တူနာငါး၊ မက်ကာရယ်၊ ပုစွန်၊ ကမာ စတဲ့ ပင်လယ်စာတွေ၊ DHAပါဝင်တဲ့ အာဟာရဖြည့်နို့မှုန့်တို့ကို ပြင်ဆင် ကျွေးမွေးပေးပါ။ ငယ်စဉ်မှာ DHA ပြည့်ဝမှုက ကလေးကို ဦးနှောက်နဲ့ အမြင်အာရုံ ကောင်းစွာ ဖွံ့​ဖြိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
EQ ကောင်းစေဖို့ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေလား ?
ကလေးကို လူမှုပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်သူတစ်ဦးအဖြစ် ကြီးပြင်းလာစေဖို့လည်း အခုခေတ်မှာ အတော်လေး အရေးကြီးပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အောင်မြင်နေသူ တော်တော်များများက IQ လို့ခေါ်တဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတင် မဟုတ်ဘဲ၊ EQ လို့ ခေါ်တဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှု စွမ်းရည်လည်း ကောင်းမွန်ကြပါတယ်။ ဒီအရည်အသွေး ပြည့်ဝစေဖို့ကလည်း လက်ဦးဆရာဖြစ်တဲ့ မေမေ ဖေဖေတွေမှာ တာဝန် အရှိဆုံးပါ။
ဒါကြောင့် ကလေးကို EQ ကောင်းစေဖို့ဆိုရင် ငယ်ငယ်ကတည်းက စာဖတ်ပြတာ၊ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားထောင်ပေးတာ၊ အချိန်ပေးပြီး စကားပြောတာ၊ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင် သင်ပေးတာမျိုး လုပ်ပေးပါ။
ကလေးကို ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းအောင် သင်ပေးတာက တိုးတက်စေဖို့ အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးရာ ရောက်သလို ကိုယ်နှုတ်အမူအရာ ယဉ်ကျေးစေဖို့ပါ ဖြစ်စေမှာပါ။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ကြီးပြင်းလာစေဖို့ သေချာ ပျိုးထောင်ပေးမိရဲ့လား ?
ဒါကတော့ ဗိုက်ထဲမှာ လွယ်ထားရကတည်း မေမေတိုင်း တောင့်တမိတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုပေါ့။ ကလေးကို ပျော်ရွှင်ကျန်းမာစွာ ကြီးပြင်းလာစေဖို့ဆိုရင် အာဟာရ ပြည့်ဝအောင် ကျွေးမွေးပါ။ စာဖတ်ပြတာ၊ ကလေးနဲ့ အတူ အချိန်ပေးပြီး စကားပြောတာမျိုး လုပ်ပါ။
ဒါတွေအပြင် ကလေးနဲ့အတူ သီချင်းဖွင့်ပြီး ကပေးတာ၊ ကာတွန်းကား တူတူကြည့်တာ၊ ယောဂ အတူတူလုပ်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်း အတူတူလုပ်တာတွေ လုပ်ပေးပါ။ ကလေးနဲ့ အတူတူ ဈေးဝယ်ထွက်တာ၊ ထမင်းပွဲ အတူပြင်တာကလည်း ကလေးနဲ့ မေမေတို့ကြားမှာ ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု တိုးစေသလို ကလေးကို အကောင်းဆုံး ကြီးပြင်းလာစေမှာပါ။
ကလေးကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ကြီးပြင်းလာစေဖို့ လုံးဝ မေ့ထားလို့ မရတဲ့ အရေးအကြီးဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ ကလေးကို ချစ်ပေးဖို့ပါပဲ။
ဒါတွေအပြင် အခြားသော ခက်ခဲတဲ့ အရာတွေကိုလည်း မေမေတစ်ယောက် အနေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ရပါသေးတယ်။ မေတ္တာအပြည့်နဲ့ သားသမီးတွေ ကောင်းကျိုးအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ မေမေတို့အနေနဲ့ အခက်ခဲဆုံးသော အရာတွေကို အကောင်းဆုံး ကျော်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခက်ခဲဆုံးအရာတွေကို အတူတူ ကျော်ဖြတ်ကြစို့လား မေမေတို့ရေ……………….
These Are the 10 Hardest Things About BeingaNew Mom https://mommybites.com/col2/moms/10-hardest-things-new-mom/ Accessed Date3August 2020
10 Hardest Things About BeingaNew Mom https://www.thebump.com/a/life-with-a-newborn Accessed Date3August 2020
The 15 hardest things about beingamum https://motherhoodtherealdeal.com/parenthood/the-15-hardest-things-about-being-a-mum/ Accessed Date3August 2020